"Umqolomba opholileyo" iyunithi ENTSHA yeBoho yokulala enye! - I-Airbnb
"Umqolomba opholileyo" iyunithi ENTSHA yeBoho yokulala enye!
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLisa-Marie
Xa iyi-421 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Wamkelekile kumqolomba opholileyo!
Relax emva kosuku olude lwe-adventures (okanye uqhubeke nokuphumla ...) kwiyunithi yethu ephefumlelweyo ye-bohemian / yaseScandinavia.
Perfect for: izibini, bestfriends, abahambi solo, umama nentombi getaways etc. (2 iindwendwe max).
3 min ukuqhuba ukuya edolophini Collingwood.
Imizuzu eyi-15 yokuqhuba ukuya eBlue Mountain, iScandinave Spa, eWasaga Beach 6.
Umqolomba opholileyo ukwigumbi elingaphantsi kwekhaya lethu. Iqabane lam, inja kunye nam sihlala kwigumbi eliphezulu kwaye siya kwabelana nawe kuphela ngendawo yokuqhuba.
Relax kwibhedi enkulu epholileyo phambi komdlalo owuthandayo weNetflix. Umqolomba opholileyo une-smart tv kwindawo yokuhlala ephambili kunye negumbi lokulala. Igumbi lokulala linendawo yokugcina phantsi kwebhedi kunye negumbi lokuqonda elivulekileyo leengxowa njl ...
Kukho i-ski kunye ne-snowboard rack eludongeni ukuze iindwendwe zigcine izixhobo zazo zasebusika. Iindwendwe zingonwabela ukupheka kwazo ekhaya njengoko sibonelela ngekhitshi eliphefumlelweyo laseScandinavia eligcweleyo kunye nezixhobo (nceda uqaphele ukuba akukho matshini wokuhlamba izitya).
Igumbi lokuhlambela libandakanya ishawari yemvula, iisepha kunye ne-blowdryer (i-silicone pad ebonelelwe ngeentsimbi ezishushu). Itafile yokungena ngaphambili iphinda kabini njengedesika encinci njengoko kukho isitulo phantsi kwetafile.
Iindwendwe zingonwabela isitulo sethu se-boho hammock ukuze zibukele imiboniso yazo ezizithandayo okanye zihlale nje.
Ukufikelela kwiyunithi ngababuki zindwendwe (akuzange kwenzeke ngaphandle kwesaziso) kufuneka kuphela ukufikelela kwindawo yombane yendlu, ukuba undwendwe lucela uncedo okanye ukuziphatha okungaqhelekanga.
I-wifi ekhawulezayo – i-421 Mbps
40" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, I-Netflix, I-Roku
ICozy Cave ikwindawo entsha yokuhlala ezolileyo.
Izinyuko ezimbalwa zokuhamba kude neenkqubo ezintle zomzila.
Imizuzu kude kwiivenkile ezizodwa kwidolophu yaseCollingwood.
Umbuki zindwendwe ngu- Lisa-Marie
Sihlala kumgangatho ophezulu wendlu kwaye siyafumaneka ukukunceda ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho